Naftaa igu kaa qasbeysee, uma qalantid Caashaqa! (Qaybti 3aad)Qalinkii : Adan Jama Kahin | S A R A A R N E W S
Naftaa igu kaa qasbeysee, uma qalantid Caashaqa! (Qaybti 3aad)Qalinkii : Adan Jama Kahin	Added by admin on August 14, 2012.Saved under Articles	Sidii aad aad wada akhriseen qaybtii hore ee maqaalka. Cabdala iyo inantii (gabadhii) sidii bay u kulmijireen intii mudda ahba. Adigu dhawr billod kadib ayay inantii ogaatay in nin Sarkaal ah oo ka tirsan ciidamada Xooga dalka , uu doonaayo inuu reerkooda waydiisto. Ninkaasoo ay Abaheed isku Beel kazo jeedan ayaa wuxu yimaada gurigooda adigu wiigiiba ila 2 jeer. Markii ay inantii (gabdhii) ogaatay in uu ninkani meesha u yimaado iyada daraaded si loo siiyo ayay markiiba go’an ku gaadhay inay la socodsiiso Cabdala marka danbay is arkaan.
Kulankii danbe ayay Cabdala iyo inantu ku kulmeen meel kamid ah meelihi ay hore uga kulmijireen, waxayna halka kaga sheekaysteen sheekoyin ku saabsan jacaylooda. Saacad kadib markay sheekadii u socotay ayay inantii ku tidhi Cabdala , Aboowe mid baan ku sheegayaya maanta oo aan ka baqayo hadaynan ka digtoonan waxa soo socda, waxa laga yabaa inuu dhibaata usoo jiido jacaylkeena dhabta ah.
Cabdala intuu fadhigii ka booday sidii qof dab ku fadhiistay oo kale oo uu naxay markaasu ku yidhi, waa maxay waxan kugu soo kordhay. Waxay tidhi waar Cabdala wax dhib ah ma jiraane, nin sarkaal ciidamada ah ayaa jira oo ay Abaahay isku beelyihiin. Ninkaaas guriga dhawr biloodba wuu iman jiray oo waxan moodaayay qaraabo salaam, laakin waxan dhawaan ogaaday in uu doonayo in uu reerka u soo geed fadhiisto oo la isiiyo aniga, sidaana warar hoose ayaan kaga maqalay deriska.
Cabdala waydiiyay inantii isagoo naxsan oo adigu ninkan hore maad ula sheekaysannjirtay, waxay tidhi xaggee , Aboowe wiilkaanayte salaam Alaykum abidkay ma isu dhaafin, adigu ma kasin waxan ku dhehay. Ninkanaytee Aaba ayay isku beel yihin sidaasaanu xafadda ugu yimaada qaraaba salaam anigu wax naga dhexeya ma jiraan, ee maxaad sidaa iigula hadalaysa aniga? Markaasu Cabadala intuu isdejiyay ayuu inanti (gabadhi) ku yidhi abaayo raali ahaw, imika haddaba waa inan ka hadlaa waxa inala gudboon iyo wixii aynu arrinta ka yeeli ahayn? intay labadoodiiba cabaar amusen!!!
Markaasi inantii ku tidhi Cabdala hadaan xal ka hadalno, waxay aniga ila tahay in anaka aan ka hor maro ninkan sarkaal ah intaanu reerka arrinta u badhigin, oo adigu reerka iwaydiisato, ka waran arrinta adigu ?? . Cabdala intuu cabaar aamusay ayuu yidhi walaahi waa arrin fiican , ee dhibaatadu waxa weeye dhaqaale imika ii diyaara ma jiro aan meher iyo arroos ku sameyo imika. Balse waxan samayn doona, intaan waxooga isku jacburiyo bal marka hore aan ku soo doono arrimaha kale ee guurku bal marka ha inoo danbeyaane. Sidii bay Cabdala iyo inantii isku afgarteen, iyadoo marka hore inantu hooyadeed iyo reerkaba marka hore wargelinaysa. Sidii ayay ku heshiyeen, kadibna Cabdala inantii Xaafadeeda u sii dhaweeyay.
Maalin kadib ayay inanti (gabadhi) hooyaded arrinti u bandhigtay. Nasiib wanaag inanta hooyadeed waxayba ka baratay Idaacada codka Abdala Nuradin oo waaba taqaana waxanay kamid tahay taageerayashiisa isaga iyo Ahmed Hassan Cawkaba, aadna way ugu faraxday arrinta inanteedu u sheegtay. Marka kadibna waxay arrintii u sheegtay hooyadedna Abaheed iyadoo amaanbadan ka bixisay Cabdala, aadna uga qancisay ninkeeda inuu inanta bixiyo, inkastuu suaala badan uu waydiiyay xagiisa ku saabsan Hooyadii iyo inantoodiiba (gabadhoodiiba) waxay arrintu falanqeenteedu sii dheerataba, markii danbe wuu iska ogolaaday. Marka saacad kadib ayay inantii (gabadhii) sariirteedii qabatay oo farxad la seexan kariwayday, iyadoo marwalba leh ilaahaw muu waagu baryo.
Markii barqadii la gaadhay ayay ayay dharkii maalinta sii kaawidaysay ,si ay galabnima maalinta khamista ah ee ay lahayaaen Cabdala , ayay galabtii u diyaargarawday sidii a cabdala goa’anka reerku qaatay ugu sheegi lahayd. Waxa la gaadhay 4:00 galabnimo iyo hadihii ay is arki jireen Abdala. Waxay tagtay meeshii Jardiinada ahayd oo Cabdala sii tegayba ila rubuc saac ka hor. Markiiba way salantahay , isna wuu ka qaaday. Kadibna agtiisa ayay fadhiisatay. Wax yar ka dib waxa soo maray wiil iibinaya Jalaato (Icecream) , loos iyo nanac. Markaasu u yeedhay Cabdala willkii uu ku yidhy waxad nasiisay laba Jalaata ah ( icream) iyo loosba, markay ay ka iibsadeen alaabti ayuu wiilkii iska baxay. Dabadeed halkii bay sheekadi ka wateen.
Haday ila nussaac fadhiyeen, ayay inantii (gabadhii) ugu bushaaraysay in arrinti doonista ay isku ogaayeen inay marka hore reerka u sheegto ay si fiicana ta ay uga dhaadhicisay reerkeeda sidaana ay ku ogolaadeen. Iyadoo hadalkii sii wadata waxay tidhi, horta hooyo markiiba way aqbashay waayo kolay idaacada ayay codkaaga ka baratay. Lakiin waxay in door ah nagu qaadatatay in Aabo arrinta laga dhaadhiciyo, kolka aniga iyo hooyaba suaa’ala badan buu naga waydiiyay arrinteena qaarna way iska dhib yaraayeen , qaarna way yara adkaayeen. Cabdala intuu booday buu yidhi oo maxay ahaayeen suaa’laha sida u adka. Waxay tidhi wax saa se ma ahayne wuxu nawaydiiyay reerkiina wixii halkan ka jooga, iyo la soo waraysto. Waxa kaloo uu yidhi wamaxay ninkan inanta soo doonanaya ee hawshii meherka iyo arrooska dib u dhigay, maxaa ka siya ninka. Dabadeedna waxan ugu jawaabnay waan nin shaqa fiican haysta oo dhaqaala xumo ma hayso e kolay dhakhsu ayuu u soo diyaar garoobaya, sidaasanu ku nidhi Aabo sidaasuuna ku qancay. Cabdala intuu qoslay wuxu yidhi walaahi meesha waad iga tiirisay oo qof nool baad tahay, aad baan u mahadsantahay , inakeen bal aan ku sii dhaweeye kolay ilaa xaafadaan ku sii gaadhsiin maanta oo ilayn anigu maanta cidna ka biqimaayo.
Lasoco qaybtii ugu danbayse ee 4aad.